Halkee iyo Sidee si ay u daabacaan eBooks
> Resource > Talooyin > Halkee iyo Sidee si ay u daabacaan eBooks
Ma abuuray buug oo ay doonayaan inay u wargeeyaan online, laakiin aadan aqoon sida iyo halka inay u wargeeyaan? Hadda waxaa jira dad badan oo dhufto ee bixiya adeegyada si ay u daabacaan eBooks. Waxaad heli kartaa qaar ka mid ah dhufto ee caanka ah, sida Amazon, si fudud. Intaa waxaa dheer, haddii aad sheeko xiiso leh oo aad u wargeeyaan qaab habboon oo leh dabool xireen image, waxaan hubaa in dadku ay u sii socotay inay u jeclahay. Halkan qodobkan, waxaan ku talin doonaa inaad hogaanka 3 dhufto si ay u daabacaan aad eBook iyo sidoo kale qaar ka mid ah talooyin Korkiinna ama qurxinta eBook ah.
Halkee si ay u daabacaan eBook ah?
Amazon.com noqon kartaa meesha ugu weyn oo ugu qiimaha badan ay u daabacaan eBooks oo kun oo qof ay raadinayaan ama eBooks iibsigu ka Amazon saacad kasta. Ka dib marka aad u naadiyo oo aad eBook halkan, waxaa laga yaabaa inaad u samaysaa faa'iidada waqti gaaban haddii aad si dhab ah u abuuray sheeko soo jiidata. Amazon Digital Text Platform waa Amazon ee eBook daabacaadda madal. Waxaad si toos ah gali kartaa adiga oo eBook ka DTP ka dib markii aad saxiixdo account Amazon ah.
Barnes & Noble ayaa Publt! Site
Sida la og yahay in dhan, dukaanka online Barnes & Noble waa meel kale oo caan ah si aad u hesho iyo iibiso eBooks. Waxay bixisaa qayb ka mid ah, PubIt !, halkaas oo aad si toos ah u gali kartaa adiga oo eBook dukaanka Barnes & Noble eBooks iyo qaybiyo sheekadaada in malaayiin akhristaha. Dabcan, aad u baahan tahay in aad sameysato akoon ah.
Apple iPad waa hit weyn ee suuqa eBook ee akhristaha hadda. Waxaa la sheegay in ka badan 28 milyan oo iPads laga iibiyey sanadkii 2011. Waxay u badan tahay sababtoo ah in dukaanka iBooks noqdo dukaanka eBook hogaanka u isticmaala iPad si ay u iibsadaan eBooks. Waxaad kartaa Lugood Connect inay geliyaan eBooks si aad u iBooks Store. Heerka boqortooyada waa boqolkiiba 70.
In kastoo aad ka heli madal ugu fiican si ay u daabacaan eBooks aad, waxaa laga yaabaa inaad ku guuldareysato inay gaaraan saamaynta la filayay, sababtoo ah wixii faahfaahin ah, sida qaabab eBook ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ah sidii ay u daabacaan eBooks.
Sidee si ay u daabacaan eBooks si sax ah?
Marka hore, waa in aad hubisaa in qaabka eBooks waa sax ah sameeyaan. Haddii aad u socoto si aad geliyaan eBook in Amazon, waa in aad u isticmaali ku raaxeysanayo, si loogu badalo eBook in DHEGTAY, AZW ama Text. Laakiin ma seegi xaqiiqada ah in hadda qaab EPUB waa qaabka eBook ugu caansan. Waxaa la aqbali karaan casriga ah, Nook, Sony Reader, Apple iPad, iPhone, iPod taabto, iwm kuu fiican tahay marka aad eBook qaab EPUB lahaa.
Labaad, ka dhigi cover soo jiidasho u leh oo aad eBook. Wax walba bilaabataa image daboolka. Waa in aad ku qorshayso il-qabad, cover ah xirfad-raadinta aad eBook.
In la abuuro cajiib EPUB eBook dabool ah oo qurux badan, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MePub . Waa xirfadle EPUB dhise si ay u abuuraan buugaagta EPUB ka Duqeyda ah ee asalka ah, .pdf, .html, .txt, .chm, iwm waraaqaha. Waa kuwan tallaabooyinku fudud si ay u abuuraan ah EPUB-buug e la MePub.
Download iyo rakibi Wondershare MePub
Burcad MePub, ku buuxi macluumaadka aasaasiga ah oo idinka mid ah eBook, dhigay qaabka iyo wax soo saarka goobaha.
Riix daboolka kasoo dajiyaan image quruxda aad loo diyaariyey sidii cover eBook ah.
Riix badhanka content Add to content dajiyaan eBook ah. Sida aan ku soo sheegnay ka kooban in ka PDF (.pdf), MS Word (Duqeyda / Buug gacmeedka), Txt (.txt), HTML (.html / .htm / .xhtml), Chm (.chm), EPUB (. epub), Images (//.bmp//.tiff)) oo dhan waa la abuuray karo qaab EPUB. "
Daawo Tutorial Video si uu u sameeyo Book EPUB ah si ay u daabacaan
Sida loo rogo ama Text in EPUB eBook
Sida loo akhriyo EPUB eBooks ku shidin
Sida loo Beddelaan eBooks in Qaabka EPUB
Cod iyo Muqaal Raadka: guurka, Text iyo Gaarka Raadka
Fikradaha sawrirrada Wedding - Samee Wedding a Photo Album for Your Wedding
DIY Baby Waxaad ku mahadsan Card si mahadnaq
Samee Flash Banner la Flash Banner arrimo